Ny faniriana mihinana legioma vaovao dia mitoetra ao amin'ny firenentsika tsy amin'ny fahavaratra fotsiny. Saingy lavitra ny rehetra dia manana tamba-jiro, ary ireo legioma izay amidy eny amin'ny toeram-pivarotana sy eny amin'ny tsena voajanahary, dia miteraka ahiahy - azo antoka tokoa ve izy ireo? Izany no antony mahatonga ny mponina ao an-tanàn-dehibe ho liana amin'ny famokarana voatabia, doka, kôkômbra ary legioma hafa eo am-baravarankely amin'ny ririnina.
Fantaro ny fomba hahazoana trano iray tsy dia mahazatra toy izany ary manombo cucumbers eo amin'ny varavarankely!
Ny endriky ny kôkômbinina mitombo eo amin'ny varavarankely amin'ny ririnina
Voalohany indrindra, mila misafidy ny karazany tsara ianao, satria tsy ny rehetra no mety tsara amin'ny fitomboan'ny fari-piainana. Tsara kokoa ny manakana ny safidy na amin'ny karazan-tsakafo vovoka (toy ny "Mashuk", "Rodnichok", "Friendly 85", sns.), Na amin'ny hybride parthenocarpic ("Gribovchanka", "Legend", "Romance", "greenhouse Moscow"). Ny voalohany dia manana endrika manintona kokoa, saingy mora kokoa ny mikarakara izany, satria mandoto tena izy ireo.
Tokony hohadihadiana mialoha raha toa ka mifanaraka amin'ny fepetra nokendren'izy ireo ny mikroklima amin'ny tranonao:
Voalohany, tokony ho 20-25 ° C farafahakeliny ny rivotra iainana, satria ny voaozona dia vokatra hafahafa;
Faharoa, ny varavarankely izay kasainao hambolena ny zavamaniry dia tokony handeha any atsimo, atsimo-andrefana na atsimo-atsinanana;
Ary fahatelo, ho an'ny komitin'ny voankazo tsara eo am-baravarankely, tsy maintsy mandamina fanazavana fanampiny ianao. Amin'ny ankapobeny, ny andro mazava dia tsy maintsy farafahakeliny 12 ora. Ho an'ity tanjona ity, dia misy lanjam-pifamoivoizana roa eo amin'ny tsena.
Andeha àry isika hanomboka hitazona. Misy vina roa azo atao eto: na amin'ny alalan'ny zana-ketsa, amin'ny fampiharana tsimokaretina voa vao haingana, na avy hatrany dia manangona voa ao anaty vilany ary rakotra amin'ny sarimihetsika.
Raha ny voka-dratsin'ny tany ho an'ny kôkômbra, dia matetika izy io no ahitana ny vaksiny, ny tavy sy ny tany lonaka amin'ny isa mitovy. Ny zavamaniry tsirairay dia mitaky farafahakeliny 5 kilao amin'ny tany, izay misy 1 vera misy lavenona vita amin'ny hazo, 1 kilaometatra lavabato ary ny superphosphate ao amin'ny karaoty. Ao anaty tavoahangy na boaty dia tsy maintsy ilaina ny manodina ny lavaka, ary eo am-pototry ny tank dia fenoy ny fasika.
Mialoha ny tokony hikarakaranao ny sehatra ho an'ny fitomboan'ny kôkômbra - mijanòna eo amin'ny tavoahangy boribory eo amin'ny 70 sm eo ho eo.
Araka ny fantatrao, ny kôkômbra dia tia ny fahamendrehana, noho izany dia tokony hotsaboina tsy tapaka izy ireo, ary amin'ny voalohany - ary niparitaka avy amin'ny ranomandry. Tokony hatao amin'ny maraina, 3 na in-4 isan-kerinandro. Mila rano isan-kerinandro ny famoloana ireo kôkômba ireo, saingy kely ihany ny fihazonana ny fahamiran'ny tany ary hisorohana ny tsy hivoahana. Raha tsikaritrareo fa mitebiteby ny fakan'ny zavamaniry, dia afafazo amin'ny tany izy ireo.
Fikarakarana - singa tsy maintsy ilaina amin'ny fikarakarana kôkômbra, izay mihalehibe amin'ny ririnina amin'ny varavarankely ao amin'ny trano. Atombohy ny hamatsiana ilay orinasa efa mipoitra eo amin'ny sehatry ny fisehoan-javatra. Mba hanaovana izany, ampiasao vinaingitra mineraly amin'ny endriky vahaolana (2 teaspoons ho an'ny rano 3 litatra). Ny zavamaniry tsirairay dia mila kaopy 1 ka hatramin'ny 2 amin'io vahaolana io, ary rehefa manomboka mitondra voankazo ny kôkômbra, dia tokony hihoatra ny lolo 3-4.
Raha teo amin'ny sehatra voalohany ianao dia nisafidy iray amin'ireo karazana voanio vovoka, avy eo rehefa ovaina ilay ovaire, dia tsy maintsy hosoloina tanana izy ireo. Mba hanaovana izany, ilaina amin'ny maraina, mandra-paha-volo ny vovobony, ny manala ny vagina (voninkazo lahy) ary mihazona azy ireo eo am-pelatànan'ny voninkazo vavy, ny tarehiny dia manana endrika kôkôma kely. Ary mandritra ny 2-3 herinandro dia ho afaka hijinja ny fijinjana voalohany!
Ary mba tsy hivoatra sy hikorontana ny kôkômbra, dia tokony hokolokina tsy tapaka ny tendron'ny zavamaniry sy ny karavato.
Tandremo ireo fitsipika tsotra ireo, ary amin'ny taona vaovao ao amin'ny varavarankelinao dia hampitombo ny kongona tsara tarehy mahatalanjona sy maitso!
Fiomanana amin'ny tany ho an'ny ririnina
Manomana zana-kafe amin'ny ririnina
Fomba fiady amin'ny orsa iray ao an-jaridaina
Ahoana no hambolena orkide?
Zamiokulkas - fikarakarana tokantrano
Ranunculus: fambolena sy fiahiana
Ahoana no tokony hambolena ny menaka?
Mavo mainty hoditra - fambolena sy fiahiana
Fonon-tantely rivo-doza no manimba?
Lotseril na Exoderil - inona no tsara kokoa?
Ireo toetra mahasoa sy ireo fepetra mifanohitra amin'ny feijoa
Tabilao fisakafoana kely
Tablets izay manapaka ny fitondrana vohoka
Hugh Jackman sy Deborra Lee Furness
Ahoana no handoko ny rindrina brick eo amin'ny balcony?
Ny fotoana tsara indrindra hanaovana fampiofanana
Mpanjohy tsara tarehy
Akanjo hoditra amin'ny vehivavy miaraka amin'ny kapa
Cystis breast - fitsaboana